FIARA SPRINTER NITRONGY TATA : Zaza roa volana sy olon-dehibe roa namoy ny ainy
Namono olona indray ny fiara sprinter. 10 janvier 2017
Zazakely vao roa volana ary lehilahy iray mpanampy ny mpamily sy vehivavy iray no namoy ny ainy ary olona am-polony ireo naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao amin’ny Kaominina Ihazolahy, Distrikan’Ambatolampy, tokony ho 76 km miala an’Antananarivo, omaly vao maraina tokony ho tamin’ny 4 ora latsaka fahaefany teny ho any.
Araka ny fanazavan’ny Kolonely Razafimandanona Tharcisius, kaomandan’ny kaompanian’Ambatolampy izay nanao ny fanadihadiana mikasika ity lozam-pifamoivoizana ity, nandritra ny resaka nifanaovana taminy taorian’ny nitrangan’ny loza, dia tsy fitandreman’ny mpamilin’ilay fiara Sprinter mpitatitr’olona mampitohy an’Antananarivo sy Farafangana no nahatonga ny loza. Fiara Tata iray nitondra olona tsy latsaky ny 20 avy any Bekily hihazo an’ Antananarivo izay nijanona teo amoron-dalana noho ny fahasimbana hatramin’ny sabotsy lasa teo no notrongisin’ity fiara sprinter ity avy ao aoriana.
Tamin’io fotoana io dia nanamboatra ilay fiara simba ary nidina tao ambanin’ilay fiara Tata ny mpanampy ny mpamily, ka voatsindrin’ny fiara tao. Potsika tanteraka ny lohany sy ny tratrany ary namoy ny ainy tsy niala nenina akory izy. Renim-pianakaviana iray ihany koa no namoy ny ainy teo no ho eo noho ny ratra mafy nahazo azy fa ilay zaza vao roa volana kosa dia tao amin’ny Hopitaly Hjra Antananarivo no namoy ny ainy. Ankoatra izay dia naratra avokoa ny mpandeha rehetra tao amin’ilay fiara Tata avy any Bekily ary mbola misy aza ireo miady amin’ny fahafatesana. Naratra mafy ihany koa ny mpamilin’ilay fiara sprinter.
Raha ny fanazavana ihany dia somary nandeha mafy ilay fiara Sprinter avy any Farafangana, ka tsy hitany ny marika famantarana fiara simba napetrak’ilay fiara Tata simba ara-teknika nijanona teo amron-dalana ka nifatratra tao ny fiara noentiny. Profon’io fandehanana mafy io ny fahasimbana goavana nisy teo anoloan’ilay fiara Sprinter ity.
Nanao antso avo amin’ireo mpamilin’ny fiara mpitatitra, indrindra ny mpitondra olona ny Lehiben’ny zandary ao amin’ny borigadin’Ambatolampy fa tokony hanaja sy hanaraka izay lazain’ny mpitandro ny filaminana ireo mpamily ireo amin’ny tsy tokony handehanana mafy. Matetika mantsy dia rehefa mandalo ny Zandary misava eny an-dalana ireo fiara ireo no mody mandeha mora fa rehefa dila izany dia mandeha mafy tokoa izy ireo.
Andrasana kosa izay fanapahan-kevitry ny sampan-draharahan’ny minisiteran’ny Fitaterana an-tanety sy ny kaoperativa iasan’ny fiara mikasika ity loza nitranga izay naharatrana sy namoizana ain’olona tao Ihazolava Ambatolampy ity. Ny tsy manan-tsiny hatrany mantsy no mibaby ny vokany.